ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
မင်းကိုနိုင် ● လေပြေကြုံလျှင်
သင်းရည်လွင် - တစ်ယောက်ထဲလင်းတဲ့ နေ့
ခိုင်မာကျော်ဇော - မျက်ရည်စတွေနဲ့ 
ခက်ဦး - ပါဂျောင်
မင်းကိုနိုင် ● ဆင်စွယ်အပြည့်နဲ့ ပင်လယ်
မောင်စွမ်းရည် - “ဆူရှီမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ”
အိပ်မပျော်ဘဲ မက်တဲ့ အိပ်မက်
သုံးဖက်မြင် အနိမ့်စံရဲ့ ကောင်းကင် ကစားပွဲ (Kyaw Home)
ရဲရင့်သက်ဇွဲ - နာဂစ်ရေ... နားနဲ့မနာ နှလုံးသားနဲ့နာတော်မူပါ
တိုးနှောင်မိုး – လူမသိသူမသိကဗျာဆရာ
KT# လူမသိသူမသိကဗျာဆရာ တိုးနှောင်မိုး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ မနေ့ကတောက်လောင်နေတဲ့ ငါ့မျက်လုံးတွေဟာ အခုတော့ ရေကူးနေပြီ ငါဟာတော်တော်ဆိုးခဲ့တယ် ကမ္ဘာကြီးကိုရော ငါ့ကိုယ်ငါရော သူငယ်ချင်းတွေကိုရော ငါ့မိသားစုကိုရောပေါ့။ စကားလုံးတွေအပေါ်ငါမက်မောခဲ့သမျှ ငါ့နှလုံးသားအပေါ်ငါ မောက်မာခဲ့သမျှ...
ကျော်ဟုန်း ● သုဘရာဇာရဲ့ ကြိုတင်ကျင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ မှားပြီး နှိပ်မိတဲ့ ခလုတ်ဆိုပြီး ဘွာတေးကူလို့ မရဘူး။ ဒုက္ခဟာ ပျားရည်နဲ့ စိမ်စိမ် ခွေးလှေးယားသီးနဲ့ပဲ သုတ်သုတ် ဒုက္ခမျိုးစိတ်...
ခြံ​ပေါင်းစုထဲကအဖြစ်​အပျက်​များ ကမ်​လူ​ဝေး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၉ သိုး​တွေဟာ ခြံခတ်​ ပိတ်​ခံထားရ ​မြေ​ခွေး​တွေ အန္တရာယ်​ ကာကွယ်​ဖို့လို့ သိုး​မွှေး​ညှပ်​​ရောင်းသူ ခြံရှင်​ကဆိုတယ်​။ လွတ်​လပ်​တဲ့ကွင်းပြင်​မှာ လွတ်​လွတ်​လပ်​လပ်​​ပြေးလွား မြက်​စားဖို့ ခြံတံတိုင်းကို...
မင်းငြိမ်းအေး – ချာလီချက်ပလင်
Pinterest ချာလီချက်ပလင် မင်းငြိမ်းအေး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၉ အသံတိတ်ခေတ်က အမူအရာနဲ့ရယ်ခဲ့ကြတယ်။ အသံလည်းထွက်လာရော အသံတိတ်သွားတဲ့ပရိတ်သတ်နဲ့ ။ No tags for this post. Related posts...
မင်းကိုနိုင် ● သီကြိုးကိုယ်တိုင် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈ ကိုမင်းကိုနိုင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။ မင်းနဲ့ကိုယ်ဟာ မွေးနေ့ချင်းမတူတောင် မွေးရက်မွေးနံတူနိုင်တယ် မင်းနဲ့ကိုယ်ဟာ အသွေးအရောင်ချင်းမတူလည်း သွေးအုပ်စုချင်းတူနိုင်တယ် ဒီလိုပဲ မင်းနဲ့ကိုယ်ဟာ မွေးဌာနီချင်းမတူငြား...
အုပ်မိုး – ငါတို့ဟာ လက်ပစ်ဗုံးကိုဆေ့ထားတာလား
SKB ငါတို့ဟာ လက်ပစ်ဗုံးကိုဆေ့ထားတာလား အုပ်မိုး (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၉ နှုတ်လုံတယ် စိတ်မလုံဘူး။ လက်ပစ်ဗုံးကို ခြေနဲ့နင်းပြီး နင်းကန် ကုန်းမအော်နဲ့။ လက်ပစ်ဗုံးကို စိတ်နဲ့ချစ်ပြီး ချိုးငှက်ကလေးကို နှလုံးသားမှာထိုးလို့ ချီတက်ဆန္ဒပြကြပါစို့..။...
မောင်ကြူးရင့် – လွတ်လပ်မျိုးစေ့
Exchangeserverrepair လွတ်လပ်မျိုးစေ့ မောင်ကြူးရင့် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၉ ငါတို့မျိုးစေ့တွေငါတို့ပျိုးခွင့်ရပြီလား ငါတို့ပျိုးပင်တွေငါတို့စိုက်ခွင့်ရပြီလား ငါတုိ့ပန်းတွေငါတို့ခူးခွင့်ရပြီလား ငါတို့ပန်းတွေငါတို့နမ်းခွင့်ရပြီလား လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပန်းတွေ ပန်းတွေဝေတဲ့တနေ့တကွေ့တော့တွေ့ရဦးမှာပဲ မောင်ကြူးရင့်၎ .၁ . ၂၀၁၉ No tags...
နရီ (မြိတ်) ● ခြတောင်ပို့
နရီ (မြိတ်) ● ခြတောင်ပို့ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၉ ဗြုန်းဆိုငါပြုတ်ကျတယ် နိုင်ငံတခုရဲ့ပိုးလောက်လန်းတွေပြစ်ခဲပြွတ်သိပ်နေသောတွင်းနက်ကြီးထဲ ဗြုန်းဆိုငါပြုတ်ကျခဲ့တယ် ခြတောက်ပို့တွေထူလဗျစ်တောထနေသောကွင်းပြင်ကြီးထဲ ဂျပိုးများတဲ့ကန္တာရချိုင့်ဝှမ်းတွေထဲ ဗြုန်းဆိုငါပြုတ်ကျခဲ့တယ် ငါအလိုမတူပြုတ်ကျခဲ့တယ် ဒီနိုင်ငံကိုပြုတ်ကျခြင်းဟာ ငါ့ရဲ့ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမှုဖြစ်တယ် ငါ့နဲ့အတူပိုးလောက်လန်းသန်း ၅၀...
မျိုးတေဇာမောင် ● အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကဗျာသင်ခြင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈ ဟော့ဒီကဗျာတွေကို မင်းတို့ အလွတ်ကျက်နိုင်ရင် မင်းတို့ အမှတ်ဘယ်လောက်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ “ဟော့ဒီကဗျာကို ကျနော်တော့ ဟော့ဒီလိုခံစားမိတယ် ခင်ဗျားတို့ရော ဘယ်လိုလဲ...
သစ်ကောင်းအိမ် ● တကယ်က မီးပွိုင့်မှာ သွန်ချပစ်ခဲ့ရမယ့်မိုးသားတွေ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၉ ကွင်းကျယ်ရင် ကျယ်သလောက် ဝါးမြို့ဖြန့်ခင်းလေ့ရှိသော မြူနှင်းများ ပြတင်းကျယ်ရင်ကျယ်သလောက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့ရှိသောရှုခင်းများ မီးပွိုင့်မှာ သွန်ချပစ်ခဲ့ရမယ့်မိုးသားတွေ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာဆိုတော့ မီးဖိုပေါ်က...
မြင့်အောင်သန့် – ချစ်သူ့လက်ဆောင်
mulpix.com ချစ်သူ့လက်ဆောင် မြင့်အောင်သန့် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၉ ဒီလက်ဆောင်အိတ်ကြီးအိမ်ပေါ်ကို ရောက်လာတာဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရောက်လာသလို သူ့စိတ်ထဲလေးလံနေတယ်လက်ဆောင်တွေကြည့်ရင်းအတ်ိတ်ကအရိပ်တွေကိုပြန်မြင်ယောင်နေတယ်အရှင်လတ်လတ်မီးရှိူ့ခံရလို့အော်ဟစ်ညည်းတွားနေသူတွေသွေးအိုင်ထဲကရဟန်းရှင်လူအလောင်းတွေအချုပ်ကားထဲမှာအသက်ရှူကြပ်ပြီးသေနေတဲ့အလောင်းတွေခြေကျင်းသံကတချွင်ချွင်ဒူးတွေတဆတ်ဆတ်တုန်ခါလို့ရဲဘက်စခန်းအပို့ခံရမယ့်အကျဉ်းသားတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေနောက်ဘက်ကတဂျစ်ဂျစ်နဲ့အသံကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လက်သီးဆုပ်လောက်ရှိတဲ့မြေကြွက်ကြီးအမွေးတွေကထောင်ထနေတယ်မျက်လုံးကဝင်းဝင်းတောက်ပြီးတခွီးခွီးနဲ့ရန်ထောင်နေတယ်. သူ့ခါးကသော့တွဲနဲ့ထုတ်ရိုက်ပြီး လက်ဆောင်အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့လယ်ကွင်းထဲပစ်ဘို့ထွက်သွားတယ်ညကပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတယ်အိတ်ကိုမြေကြီးပေါ်ချလိုက်တာနဲ့ကြွက်ပေါက်စလေးတွေလယ်ကွင်းထဲပြေးသွားကြတယ်ကြက်သီးဖြန်းခနဲထသွားတယ်တိုးရှဲတုန်ယင်လေသံတွေသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆို့ဆို့နင့်နင့်ကြေကွဲသီဆိုနေကြတာလားတစ်ယောက်ယောက်ကိုအငြှိုးတကြီးကြိမ်းမောင်းဆဲဆိုနေတာလားဒီမိုကရေစီအရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာလားအသံတွေကနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်မြေကြီးပေါ်ချထားတဲ့အိတ်ကလည်းရှာလို့မတွေ့တော့သူ့အိမ်ရှိရာခပ်သုတ်သုတ်ပြန်လျှောက်သွားတယ်နံနက်မိုးသောက်ပြီတစ်အိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်အသက်ရှူသံပင်မကြားရတော့။ မြင့်အောင်သန့် ၃၀ ၁၂ ၂၀၁၈ Tags: ချင်း...
ေ အာင်ဝေး● ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၂ )
ေ အာင်ဝေး● ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ(...
ကဗျာဒေဝတာ လင်းသက်ငြိမ် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ငြိမ်းချမ်းရေးညစာကို အမျှော်ကြီးမျှော်ခဲ့သူဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး စားသောက်ပွဲတွေကိုသာ မြင်တွေ့သွားခဲ့ရရှာတယ်။ ချစ်တတ်သူတိုင်းကို မုန်တိုင်းသင့်စေခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမှာ ကဗျာတွေကို ရက်ရက်ရောရောကြီး ချန်ထားပေးခဲ့တာ နည်းတဲ့စေတနာလား။ ပါရီကမဟုတ်ဘူး...
ဆောင်းယွန်းလ ● မျက်နှာဖုံးမခွာရသေးတဲ့အကြောင်းများ
ဆောင်းယွန်းလ ● မျက်နှာဖုံးမခွာရသေးတဲ့အကြောင်းများ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းမျိုးကိုမှလိုချင်တယ်လို့ ဆိုကြမှာလား အားနဲသူရဲ့ငိုသံက တိုးတိတ်လွန်းပြီး အားကြီးသောရယ်သံတွေသာ မိုးထိအောင်ပဲ့တင်ထပ်နေခဲ့ နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်တဲ့ မနေတတ်လို့ မကျေနပ်စရာတွေပြည့်နေတာလား အနေမတတ်လို့...
ကြယ်တာရာဝင်း – မရင်းဖြစ်သော ရင်းမြစ်များ
KT# မရင်းဖြစ်သော ရင်းမြစ်များ ကြယ်တာရာဝင်း (မိုးမခ)၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၈ မြစ်တမြစ်မှာ ရေနှစ်ခါချိုး မရသလို ငါတို့ခေတ်မှာ အခွင့်အလမ်းတွေ ပန်းလို့ မပွင့်ကြသေးဘူးလား.. နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အလုပ်သမားတွေ ရှိဆဲ.. အသက်ပေးသွားတဲ့...
မောင်ကြူးရင့် – ငြီးငွေ့ခြင်း
KT# ငြီးငွေ့ခြင်း မောင်ကြူးရင့် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈ မှန်အကြည်သားပေါ် ဖုံအထပ်ထပ်နဲ့ ရွက်ဆုတ်ပြက္ခဒိန်ကို ငြီးငွေ့လာပြီ မူလအသားပေါ် မိတ်ကပ်ပါးပါးလိမ်းတဲ့ ဆုတွေကို ငြီးငွေ့လာပြီ မတူတဲ့ အရောင်နှစ်ရောင် စပ်ထားတဲ့အချစ်ကို ငြီးငွေ့လာပြီ...
ပင့်ကူအိမ် (ဆားလင်းကြီး) ● သုသာန်မြေ
ပင့်ကူအိမ် (ဆားလင်းကြီး) ● သုသာန်မြေ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈ တောင်ပေါ်က မိုင်းခွဲလိုက်တိုင်း ဒေါ်ခင်ဝင်းလို့ စိတ်မှာ ကြားနေရ တောင်သူမကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို စမ်းမိတိုင်း ငါတို့ အသွေး အသားဟာ...
မိုးခါး ● တီရှပ်ပေါ်ကစကားလုံးများ
မိုးခါး ● တီရှပ်ပေါ်ကစကားလုံးများ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈ မြစ်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးထားခဲ့ကြတယ် ဗန်ဂိုးလူလားမြောက်ရာသီထဲ ဆေးစက် ကိုင်လှုပ် ပန်းတုတွေလွင့်နေတဲ့တိမ်အဖြစ် ကိုယ်ဝါရောင်ရှိန်ရှိန်တွေ တောက်ပလွန်းတဲ့သေခြင်းတရားကို ခဏဖြစ်ဖြစ်မေ့ထားလိုက်တော့ ခြေတလှမ်းနဲ့တံတားခင်းဖို့ ကျောနံပါတ်ကိုအသားပေးထားတဲ့စာသားနဲ့ မျက်လုံးပစ်မှတ်ပေါ်ကဒဏ်ရာ။ ။...
ကေ​ဇော်​မိုး ● အညတြရ
ကေ​ဇော်​မိုး ● အညတြရ ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ​နေ့စဉ်​ညတိုင်း မွန်​ရိုးရဲ့ကြယ်​​တွေထဲမှာ ​ပြေးတမ်းလိုက်​တမ်းကစားတယ်​ ကတ်​ကိုဘိန်းရဲ့လက်​ခတ်​သံမှာ အို​အေစစ်​က​လေးအစပြုလို့ ဘီသိုဗင်​ရဲ့ဆင်​ဖိုနီအ​တောမှာ ကိုမာဝင်​ခဲ့ရ ကားလ်​မတ်​ရဲ့အလံ​တော်​ထဲ​ နေရူဒါမှာ ကြည်​လင်​ခဲ့ မိုးဇက်​က ဒူးရွန့်​ရဲ့​ကြွေဖလားကိုယူလာတယ်​ ဗင်​ဂိုးရဲ့အဝါ​ရောင်​ထဲ...
Page3of 131«12345...131»